पैसाको अभावले एक समय रेलमा गीत गाँउथे आयुष्मान खुराना !
भारतीय बजारमा ‘साओमी ११ लाइट एनइ ५–जी’ ल्याउने तयारी , यस्तो छ मूल्य र फिचर
आज सुनको मूल्य स्थिर, कतिमा हुदैंछ कारोबार ?
संविधान दिवसका अवसरमा ९ सय ३ जनालाई मानपदवी र विभूषण प्रदान गरिँदै
थारू समुदायले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरले असोज ११ गतेदेखि ८ लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्दै
कार्टुनिष्ट रविन सायमीद्धारा सरकारले दिएको विभूषण बहिष्कार
पोखरीमा डुवेर दुई जना नाबालकको मृत्यु
You are at:Home»मनोरञ्जन»पैसाको अभावले एक समय रेलमा गीत गाँउथे आयुष्मान खुराना !
By bktnews Posted on	 September 14, 2021 मनोरञ्जन
काठमाडौं । बलिउड इन्डस्ट्रीमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउने अभिनेतामध्ये एक हुन् आयुष्मान खुराना । उनी आज आफ्नो ३७औं जन्मदिन मनाइरहेका छन् । उनी चण्डीगढमा १९८४ मा पंजाबी परिवारमा जन्मिएका थिए ।
रेडीयो र टिभी रियालिटी सोबाट आफ्नो करियर सुरू गरेका खुरानाले बलिउडसहित लाखौं मुटुहरुमा राज गरेका छन् । आज उनको जन्मदिनमा उनीसँग सम्बन्धित केही विशेष कुराहरु हामीले प्रस्तुत गर्न लागेका छौं ।
आफ्नो संघर्ष दिनहरुमा आयुष्मान एक कलेजका साथीहरुसँग गोवा गएका थिए । त्यतिबेला आयुष्मानसँग यात्रा गर्नका लागि पर्याप्त पैसा थिएन। यस कारण उनले त्यसबेला रेलमा एउटा गीत गाएर पैसा संकलन गरेका थिए । यसपछि उनी लगातार रेल मा गीत गाउन थालेका थिए । एंकर, गायक र अभिनेता आयुष्मानले १७ वर्षको उमेरमा इन्डस्ट्रमा प्रवेश गरेका थिए ।
उनी च्यानल वी म आउ ‘पपस्टा’ मा भाग लिने कान्छा प्रतियोगी थिए। फिल्ममा आउनुभन्दा पहिले आयुष्मानले रेडियोमा आरजेको रूपमा काम गर्थे। बिग एफएममा उनको शो’मान ना मान’, मैं तेरा आयुष्मान’ सुपर हिट थियो । आयुष्मान खुराना एमटीभीको लोकप्रिय शो रोडिज जितेपछि चर्चामा आएका थिए । निर्देशक शुजित सरकारले उनलाई फिल्म जगतमा पहिलो ब्रेक दिएका थिए ।
२०१२ मा आयुष्मानले शुजितको सुपरहिट फिल्म ‘विक्की डोनर’ बाट डेब्यू गरेका थिए । आयुष्मानको उक्त फिल्मको लागि धेरै पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो। विक्की डोनरपछि आयुष्मानले ‘नौटंकीसला’,’बेवाकोफिया’, ‘हवाईजादा’ फिल्म गरे। यी फिल्महरु बक्स अफिसमा ठप्प भए। आयुष्मान खुरानाको फिल्म ‘दम लगाई हैशा’ २०१५ मा रिलिज भएको थियो। यस फिल्मपछि, आयुष्मानको क्यारियरले फेरि गति लेयो र उनले एकपछि एक हिट फिल्म दिएका छन् । एजेन्सी
प्रकाशित मितिः २०७८ भदौ २९ मंगलबार
कमेडी च्याम्पियन सिजन २ को उपाधि ताप्लेजुङका भरतमणि पौडेलले जिते
‘अल्झिएकी शीतहरु’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
‘परिष्कृत’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)